Fotoam-pialantsasatry ny Mpitandrina – septambra 2012 – FJKM Ambavahadimitafo Fotoam-pialantsasatry ny Mpitandrina – septambra 2012 |
Ny mpitandrina Rakotoniera Eric dia ao anatin’ny fotoam-pialantsasatra mandritra ny volana Septambra.
Ny fiverenany miasa dia ny Alatsinainy 01 Oktobra.
Ny fandraisan’olona dia ny alarobia 03 Oktobra maraina na koa azo antsoina mialoha izy
araka ny laharan-tariby mahazatra.
Ny raharaha rehetra mandritra io iray volana io dia ny Biraon’ny Fitandremana no mandamina izany. Aoka hanatona azy ireo isika na amin’ny famangiana manjo na ny fampaherezana ny fianakaviana ao am-piangonana.
Ny Dinika Batisa sy Fanorenam-panambadiana dia ny Mpitandrina ihany no hanao izany ankoatra ireo efa voalamina mialoha dia ny 09 sy ny 22 Septambra.
Maniry soa sy mifampivavaka isika.